Vakamanikidzwa mumisasa yechibharo munguva yei Holocaust muMorocco
Vakamanikidzwa pamisasa yeBou Arfa Chiyeuchidzo chekuparadzwa kwevanhu muMorocco
Sticky post By Oliver Bienkowski On 19. January 2020
Kudzvanywa na 2 bulldozers kuburikidza neMoroccan state. Iyo obelisk yaive sundial uye isina chekuita neye Uygur chirangaridzo.
Kunyangwe ruzhinji rwevaMuslim vanogara muMorocco, maUighurs haana kutsigirwa muChina. Isu takavaka chirangaridzo cheichi, icho chakangoonekwa neveArab media mushure mekunge bepanhau muIsrael rataura pamusoro pechimwe chimiro chakafanana neye Berlin Holocaust yekurangarira. BBC ChiArabic chakashuma nezveprojekiti. Izvi zvakakonzeresa pepanhau repasi rese boomerang umo iko kufukidzwa kwanga kusisiri kwakanangana neiyo Uyghurs asi paIsrael / Palestine kurwisana. Mifananidzo yakabudirira!
Nhau yeMoroccan Holocaust paWikipedia haina kumbotaura nezvemisasa yechibharo mugwenga maifira maJuda. Chirangaridzo chedu chakaparadzwa neMoroccan Interior Ministry mushure megore rekuvaka. Isu takaunza zvakare nyaya yekumanikidzwa kwevashandi munhoroondo yeMorobha ku Wikipedia kurwisa kupokana kwenhau nekupokana neSemitism. Kunyangwe iyo yaive yekuisa art kubva pakutanga kuti inongedza kutyorwa kwekodzero dzevanhu neChina kune iyo maUghurs.
Iyo boomerang yemhizha yakambobhururudza iyo yekugadzira iyo arc kurwisa-kurwisa rusaruraganda uye kutaura nezvevakakanganwa vakamanikidzwa vashandi mukati meWikipedia.
Zvine kusuwa, Mororom haazive akadaro mafomu ezviito zvekuita. Chikwata
Kune yedu Moroccan saiti, ine mufananidzo weOrthanc shongwe kubva kuna Lord weRings, zviremera zveMoroccan zvinoita kuti hupenyu huome. Kicheni yekubikira vanhu mazana mashanu vekuGerman THW yakatapwa, guva remushandi wekuvandudza wechiGerman aine mabulldoz rakaparadzwa uye imba yekubatsira yekuvandudza, kubva ipapo iyo vanhu vakabatsirwa zvakananga, yakapunzirwa pasi.
Mumisasa yechibharo yeMorocco, zviuru zvevanhu zvakafa zvichishanda munjanji yeSahara. Nekuda kweizvozvo, Mororiya ine zvakare Holocaust nyaya. Vanodaidza Bouarfa iyo Auschwitz yegwenga
Vhura Tsamba kuna King Mohammed 6 yeMorocco.
Wadiwa Highness Mohammed VI, Art haisi mhosva. Sangano redu reGerman reekodzero dzevanhu & kusimudzirwa kwehunyanzvi netsika rinofanira kukurumidza kunyunyuta kwauri nezvekutyorwa kwakanyanya kwekodzero dzevanhu kuMorocco. Izvo zvese zvakatanga nekicheni supu yekubikira yeAfrica, iyo yabatwa netsika kubva munaMay 2018 muTangier, nekuti isu tinofanirwa kutengesa soups ekutengesa muMarrakech. Kwegore manje, taona vanhu vachidya kubva mumarara marangi, uye sipo yedu yekubikira ingadai yakabatsira vamwe vanhu kuti vazadze. Sei maofficial ako achipwanya munda wedu wevaimbi? Pane chirongwa chekuvaka munaGunyana 2018, haina kupindurwa nezviremera zvako. Mazuva ese takaedza kusangana nehutongi hwenyu kuburikidza nematanho ese epanyika kubva kuParamende kuburikidza nemamishinari eMoroccan, izvo hazvina kushanda. Ivo havana kuzopindura. MunaDecember 2018 mushandi wedu wePixelHELPER anovandudza Tombia Braide akafa nekuti aive akatsamwa nemaitiro evatungamiriri zvekuti akafa nekurova kwemoyo. Ehe, akavigwa seyeuchidzo pasina munhu aripo uye mhosva yacho yakachinjirwa kuMoroccan Undertaker. Isu takavaka sundial mukumurangarira Iye, izvi zvakaparadzwa nema bulldozers avo.Takaisa 100.000 € muMoromo mukati megore. Takashanda chingwa chakabikwa chakabikwa kuti chipe chikafu muAfrica uye chakapa musha wedu zuva nezuva nechingwa chemahara. Yako gemarmerie inotora vashanyi kubva kwatiri kuenda kunharaunda pane izvo zvinorambidzwa kutishanyira. Kubvunzurudza pamwe nekufungidzira muenzi wedu angave mutengesi uye Freemason haigoni kutsungirira. Pashure paizvozvo pakava nemakarova mushanyi wedu. Vatapi venhau vakaramba vachishanyirwa kushanyirwa kwepfuma yedu nemapurisa. Kunyangwe isu tiine ese magwaro anodiwa kuti tiwane mavheti evaridzi mune yako nyika, kusanganisira 3 makore ekupemberera nesarudzo yekutenga, mapurisa ako anoda kutinyudza zvakaoma. Isu tinoda muripo wekuparadza uye kuvakazve yekotoni yechingwa yekubheka. Iwe unofanirwa kuzivisawo mapurisa emunharaunda yako kuti maartist haasi mahugandanga. Nekuti ndozvatinoitirwa. Vashandi vedu vanotyisidzirwa neMkadem, ruoko rworuboshwe rweCaid, mumuviri vasingakwanise kuvhara maburi mumadziro edu ekunze. Zve shuga festival yedu timu yedu ingadai yaida chironda chechirume nekuda kwekurumwa nembwa. Nehurombo, dhipatimendi rake rezvehutano rakavharwa muAit Ourir uye Marrakech. Tinokumbira 100.000 Euro kuti iitwezve uye nekukumbira ruregerero kubva kumukuru wako wemapurisa muAit Ourir uye Caid muAit Faska. Ivo havambotauri nesu asi vanongotaura chete nevanotarisa Nekuda kwemhirizhonga yemapurisa inopesana nemuenzi wedu, tinoda vashandi ve100 sarudzo yedu yemakore 100 kubva kuAit Faska & Ait Ourir kuti vashande mumabasa edu eumhizha.
Vakanganikwa vakamanikidzwa vashandi musasa kuMorocco. MaJuda mazhinji akafira pano.
Muzhizha 1942 yakashanyira Dr. Wyss-Denant International Red Cross Mission (IRC) yakatungamira misasa yeBoudnib, Bou Arfa uye Berguent. Nhasi uno hapana anoyeuka zuva mumisha iri kure.
Dema dema rinoumba Yekuuraya kwechirangaridzo mune imwe unit. Vashanyi vanodzungaira kuburikidza neizvi
Kufungidzira kwechirangaridzo chikuru cheKurasika munyika
Kuonekwa pamberi pekuparadzwa. Kuvaka 1 gore ne10 Moroccans.
Zvakare mural yakaitwa naWalter Lübecke yakaparadzwa ikapendwa pamusoro. Mureza weEU waputswa pasi.
Pamwe pacho maive neFrance yekudzivirira Morocco 14 fani dzemhando dzakasiyana-siyana aine 4.000 murume. Chikamu chimwe chete muzvitatu vaive vaJudha vemarudzi akasiyana. Vasungwa vese vaive varume, kunze kweSidi Al Ayachi, maive nevakadzi nevana. Mamwe makamu aichengetwa nzvimbo dzevasungwa, kureva majeri chaiwo evapikisi vezvematongerwo enyika Vichy. Vamwewo vanonzi mavanofamba mamisasa evapoteri. Vamwezve vaichengeterwa vashandi vekunze. Kana maJuda ari muBou Arfa Camp Pasi paVichy, iyo Trans-Sahab Railway yakava chiratidzo chakakosha chekubatana neChitatu Reich. Naizvozvo, pakanga pane kudiwa kukuru kwemanyowa. Ndiani aisakwanisa kushanda zvakanyanya akafa zvakatenderedza.
Zviuru zveSpanish Republican zvakava nemutoro mumapoka evashandi vekunze kuvaka uye kuchengetedza maturu echitima. Kukurumidza kwebasa mushure mekutiza kudzoreredzwa kwaFranco kwaive kwoutsinye uye kusava neutsinye.Vashandi vemuSpanish vakashandurwa kuva mhosva chaidzo. MaJuda akadzingwa kubva kuCentral Europe uye maCommunist echiFrench vakaendeswa ikoko. Hupenyu hwezuva nezuva ikoko hwaityisa. Vazhinji vakafa nekunetswa, kushungurudzwa, kurwara, nzara kana nyota, kusvibirira kana kurumwa nenyoka.
Iyo Berguent musasa (Ain Beni Mathar) yaishandiswa neDhipatimendi reIndasitiri Rokugadzira. Yakanga ichingo chengetwa maJuda chete (155 muna Chikunguru 1942 uye ipapo 400 kutanga 1943 maererano neCRI mushumo). "Asi nyaradzo yemweya iyi haina kudzikisa chokwadi chekuti Bergue kambi yaive imwe yeyakaipisisa," akadaro Jamaa Baida. Iyo Red Cross yakakumbirwa kuvhara pasi, maJuda aigara muBergguedu, kunyanya kubva kuCentral Europe, vakambotizira kuFrance. Vazvipiri veLegion vekunze avo vakabvisirwa masimba zvichitevera kukundwa kwe1940 uye ndokuzovharirwa "zvikonzero zvekutonga". Izvi ndizvo zvakaitika kuna Saul Albert, mugari weTurkey akauya kuFrance ne1922. Akasungwa muBergua kusvikira aburitswa muna Kurume 1943. Mubhuku rake diary anonyora kuti:
"10. Kukadzi (1941): Mabwe akatsemuka zuva rese. 2. Kurume ...: Handover kuboka rechishanu pamwe nemaJerman maGerman. Ini handizvide izvozvo zvachose. Basa harina kufanana; Taifanira kurasa ... 6. Kubvumbi: Hatigone kumira hupenyu huno zvakare. Ndine fivha, mazino ... 22. Gunyana: Rosh Hashanah: Hapana munhu aida kushanda ... 1. Gumiguru: haina kudyiwa ... "
Varindi, vazhinji vacho vaive veGerman, vaibata noutsinye, hutsinye, uye hutsinye. "Vanofanirwa kunge vakabatana neiyo NS-SS yakaipa." Vamwe vasungwa vakapunyuka, vakasvika kuCasablanca uye vakabatana nemauto.
MuBoudnib, guta diki rine vagari ve10.000, varwi vehondo yazvino ndivo zvapupu zvekupedzisira zvemusasa wemauto eFrance. Vagari vakura vanochengeta zviyeuchidzo: "Ndinogona kukuudza zvinhu zviviri chokwadi. Yekutanga turakiti reBoudnib, iro rinonyanya kuve vaJudha. Chechipiri ndechekuti vazhinji vemaguta emisasa vakadzidziswa chikoro chekutanga. "(Tel Quel Magazine Nha. 274 ye19./25, Chivabvu 2007).
Maurice Rue, mutori wenhau wecommunist, akadzidziswa ikoko. Akatiudza kuti "yevasungwa ve40, vatatu-vatatu vaive maCommunist, maSocialist, uye maGaullists maX XUMUMX vasati vasvika kwemwedzi mishoma."
Mushure mekugadzika kweAmerican pa8. Mbudzi 1942 yakabatana neMorocco padivi reAllies. Muna Ndira 1943, maAllies akasangana kumusangano muCasablanca. Chibvumirano chekuronga nemauto chakasainwa. Nguva pfupi yapfuura inotanga nekupinda kweSicily (Operation Husky, Chikunguru 1943) kuguma kweEurope kwakatorwa neGerman.
Kuvakwa muBou Arfa hakuna kukanganiswa uye mamiriro acho haana kuchinja zvakanyanya kuti ave nani. Vakabhadharwa zviri nani pane vasungwa vemuItaly neGerman. Nekudaro, kuvakwa kweTrans-Sahara kunoramba kuri gehena remazuva ese. Iyo purojekiti, iyo yakadudzirwa seyakaishatiswa, yakasiyiwa neFrance chete 1949.
Zvikasadaro, mafani acho akakurumidza kubviswa pakati pekupedzisira kwe1942 uye kutanga kwe1943.
Iyo yakanyorwa naBill Cran naKarin Davison, yakafambiswa paArte, ent
Yekutanga Yekuuraya vanhu muNorth Africa
Chiratidzo chakanangana nekutambudzwa vadiki pasi rese. Kuvaka kweyekutanga Yekuuraya kweNyika muNorth Africa kunoitirwa kushanda sosi yeruzivo nezvekuuraya kwevakuru vezvikoro neruzhinji.
Kana maburi ese akataura mazwi anopfuura chiuru. Basa rekuvaka pane yekutanga Yekuuraya kweNyika muNorth Africa yakatanga pa17.07. Isu tinosimudzira matenga kuti tipe vashanyi mune iyo labyrinth ye grey blocks pfungwa yekushaya rubatsiro uye kutya kuti vanhu vaive mumisasa yevasungwa kare ikako. Tinoda kugadzira nzvimbo muNorth Africa iyo inounza ndangariro kuchizvarwa cheadhijitari. Nechekugara, vataridzi varipo panzvimbo yekuvaka uye vanogona kushandisa zvipo zvako kufambisa huwandu hwevashandi uye zvidhinha kuti zvivakwe. Vanhu vazhinji vano tarisa uye vanopa hombe iyo Holocaust Chirangaridzo inova.
Chirangaridzo cheHurumende chemuMarrakech chinonzi ndicho chikuru pasi rose. 5 inowedzera saizi yeBerlin Holocaust Chirangaridzo inozove iri padenga re 10.000 dombo rakatenderedza nzvimbo yeruzivo inodzidzisa vashanyi nezvekuurayiwa kwevanhu.
Iye Muvambi wePixelHELPER Foundation, Oliver Bienkowski, akatsvaga zita rake mune dhatabhesi reYad Vashem ndokuwana mamwe marongedzero, akabva atarisa kwaive kunotevera Holocaust Memorial iri muAfrica uye akawana imwe chete muSouth Africa. Sezvo zvakaita sehafu yerwendo rwenyika kubva kuMoroka, akafunga kuvaka Hondo yeKumuuraya paPixelHELPER saiti. Nzvimbo dzepedyo dzese hadzina chinhu, saka pane mukana wekuvaka chero 10.000 kudenga.
Vakamanikidzwa pamisasa yeBou Arfa Chiyeuchidzo chekuparadzwa kwevanhu muMorocco April 21st, 2020Oliver Bienkowski
Tagged: Android App, boka revanhu mari, rubatsiro rwekubatsira, Livestream